Jirdilka Biyaha - Analogy-ga Falanqaynta Ayaa Buundo Aad U Dheer Ku Socda | Martech Zone
Jirdilka Biyaha - Nooca Falanqaynta ayaa taga Buundo aad u Fog
Arbacada, Agoosto 12, 2015 Jim Stern
Xogtu, sida biyaha, waxay ku timaadaa qaabab badan. Maskaxda bini'aadamka ayaa u soo baxday inay sifeeyaan inta badan xogta nagu soo socota sababtoo ah wax badan ayaa jira.
Markaad indhahaaga iyo dhegahaaga furto, xogtu waa meel walba. Midabka darbiga, codka qaboojiyaha iyo urka qaxwada deriskaaga waxaa loola dhaqmaa sidii qoyaan. Biyuhu waxay ku jiraan hawada markasta laakiin faa iido malahan in fiiro gaar ah loo yeesho.
Markay biyuhu isku uruursadaan ceeryaamo, waxay kugu qasbeysaa inaad aragto waxayna ka dhigeysaa fahamka adduunka kugu xeeran dhammaantood mid aad u adag. Xog-ururin aan dhammeystirnayn, xog la musuqmaasuqay, cilmi-xumo, gabagabo been ah iyo eex garasho ayaa dhammaantood kaa dhigaya inaad ku lumiso jidkaaga ceeryaamo.
Xogtu waxay u dhacdaa sida roobka oo kale. Markay inyar yaalliin, si waalli ah uma qanacsanaanayso –waxay kufilan tahay in gaadhigaaga wasakh yeesho oo wareerka wareeriso. Waxaad is arkeysaa adigoo tirtiraya barta muraayaddaada iyadoo qof uu kufayo meel xog ah oo aan kala sooc lahayn, lagana soo ururiyey ilo aan mugdi ku jirin.
Biyo xidid ah balli gacmeed waa khatar. Xogta, laga soo ururiyey sahay aan la isku halleyn karin, midkoodna aan la nadiifin ama aan caadi ahayn oo loo daayey inuu fadhiisto, ayaa si fudud ugu horseedi kara gabagabo khaldan
A qulquli joogto ah biyaha waxay noqon karaan kuwo kufilan in la buuxiyo maqaayada ama lagu ilaaliyo nidaamka deegaanka dhirta. Kaliya seddex dhibcood oo xog ah (tirada emayllada la soo diray, oo ka soo horjeedka la furay, ka soo horjeedka la riixay) ayaa sii wadi kara barnaamijka suuq geynta.
A socodka caafimaad xogta qaab qaab yar oo biyo ah ayaa loo isticmaali karaa maydhashada. Socodsiinta xogta joogtada ahi waxay u oggolaaneysaa cabirka iyo isbarbardhig taariikhi ah Ku habboonaanta bogga soo degitaanka waxaa lagu dhammaystiri karaa xogta beddelka joogtada ah.
A webi yar awood u siin karaa dhagax si loo arko qori ama loo shiido qamadiga. Mashiinka talo soo jeedinta ayaa kaliya u baahan wax ku biirinta la isku halleyn karo oo ka timaada xoogaa wabiyaal ah si loo kordhiyo qiimaha gawaarida wax iibsiga.
A biyaha of ayaa dhaqaajin kara rooga weyn ee biyaha iyo qulqulka macluumaadka oo ku filan ayaa wadi kara wakhti dhab ah, nidaamka maadada firfircoon.
A webiga taasi waa mid ballaadhan oo qoto dheer oo ku filan waxay taageeri kartaa dhammaan warshadaha gaadiidka. Xog ku filan ayaa dul sabayn kara maraakiibta iyo maraakiibta xamuulka qaab qaab ururinta buskudyada ka socda shabakadaha xayeysiinta, isu-geynta xogta barnaamijka kaararka daacadnimada, iyo dilaaliinta xogta.
Markii xogtu ku timaaddo xaddiga la filayo xilliyada la filayo, waa la qaban karaa, la marin karaa oo la isticmaali karaa. Nidaamyada waraabka, biyo xireennada iyo baraagaha ayaa bixiya dareen xakameyn ah waxayna u oggolaaneysaa dhismaha kaabayaal sii ballaarinaya kanaallo, qufullo iyo biyo xireeno. Bakhaarada keydka xogta waxaa lagu dhisay qulqulka kalsoonida yar.
Nadaafad ayaa ku xigta Cibaadada
Biyaha nadiifka ahi waxay muhiim u yihiin guusha nolosha, waraabka, warshadaha tamarta ee socda, iwm. Qeexitaanka 'nadiif' waa loo badali karaa ujeedada; waa caadi haddii algae ku jiraan biyo qaboojiya warshad koronto oo lama aqbali karo hadii ay jiraan in kabadan 10 qaybood halkii bilyan ee arsenic ee biyaha la cabbo.
Xogtu waa isku mid. Codsiga boostada tooska ah, inaad leedahay cinwaanka qofka (Mr., Mrs., Ms.) waa mid aan muhiim ahayn… inaad dhakhaatiir u dirto mooyee. Laakiin xogta wasakhda ah ayaa kaa kicin doonta mar kasta.
Maadaama uu yahay Saynisyahan Sare ee Xogta Mareykanka, DJ Patil, ku dheji Shirka Koowaad ee CTO, "Haddii aadan ka fekereynin sidii aad xogtaada nadiif ugu ahaan laheyd bilowgii hore, waad f ^ ¢ & ed. Waan dammaanad qaadayaa. Isku dayga inaad nadiifiso kadib xaqiiqda waxay qaadan doontaa bilooyin ugu yaraan. ”
Haddii aad biyo u kululeyso barta wax lagu kariyo, waxay awood u yeelan kartaa kacaan wershedeed oo dhan. Xogtu waxay umuuqataa inay sameyso wax lamid ah. Laga soo bilaabo marka kombuyuutarradu kaydin karaan iyo sidoo kale xisaabin karaan, xog ayaa la ururiyey sida ugu dhakhsaha badan ee qalabka keydinta loo abuuri karo in lagu sameeyo.
Maaddaama xogta laga helayo biya-mareenadan ay ku dhex qulqulayaan matoorrada mashiinnada, dhammaantood waxay ku dhammaanayaan harada, gadaasha biyo xireenka. Maaddaama xogta loogu sii daayay qaab kontorool ah, waxay awood u siineysaa mashiinnada warshadaha xogta; makiinadahaas waaweyn ee farsamaynta xogta oo leh magacyo sida Google iyo Facebook. Abaar ma jiri doonto halkan.
Ugu dambayntiina, waxaa jira barkad qoto dheer oo biyo ah, oo sugeysa falanqeeyaha inuu quusto. Qalabka biyaha lagu dhaansado iyo qoriga waranka oo gacanta ku jira, falanqeeyaha ayaa baaraya moolka dheer, khariidadaha dhulka cusub iyo wuxuu soo helay noocyo cusub. Waa waqti aad u xiiso badan inaad noqoto sahamisa xog.
Taasi waa sababta qaar badan oo ka mid ahi ay u soo bandhigayeen Shirka EMetrics tan iyo 2002. Fursadda xigta waxay ku taal Boston, Sebtember 27 illaa Oktoobar 1, 2015.
Diiwaangelinta Shirarka eMetrics
Iyo waxa ku saabsan awoodda xogta si loo xardho Grand Canyon soo socota? Ka waran dhalaalka dhalaalaya ee xogta habeysan? Sideen ugu daaweynaa biyaha qashinka adduunka oo noqda kuwa aad u feejigan oo asturnaanta?
Kuwani waa su'aalo wakhti kale iyo biyo hoostiisa buundada.
Tags: AnalyticsDatanadaafada xogtasayniska xogtaqiyaasidshirkii emetrics
Jim Stern waa la taliye caalami ah oo diirada saaraya cabirka qiimaha abuurista iyo xoojinta xiriirka macaamiisha. Sterne waxay qortay sideed buug oo ku saabsan suuq geynta isdhexgalka, waa Aasaasihii Madaxweynaha ahna gudoomiyaha hada Ururka Falanqaynta Dijital ah wuxuuna soo saaraa Shirka EMetrics iyo Shirka Falanqaynta Warbaahinta.
Badhanka Iibsigu Miyuu Caawin Doonaa Warbaahinta Bulshada iyo ROI?
Mawduuca Tayada iyo Tirada: ROI ee Qorista Yar